လျှပ်စစ်အန္တရာယ် သတိပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြ ပေးခြင်းဖြင့် အများပြည်သူများ လျှပ်စစ်အသိ သတိရှိရန် ဖြစ်ပါသည်။ သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (၃) ၌ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော “ လျှပ်စစ်စီးဝင်နိုင်သော ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းအောက်အနီးတွင် သတိမထားဘဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု”ဖြစ်စဉ်အချို့ကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များတွင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သော “စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်များ တွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ တပ်ဆင်သုံးစွဲမှု မရှိခြင်းကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း” ဖြစ်စဉ်အချို့ကို ဖော်ပြလိုပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တွင်ဦး…………..နေအိမ်ရှိ ရေဝင်နေသော မီးဖိုဆောင်အတွင်းမိန်းခလုပ်မပိတ်ဘဲ မိမိသဘောဖြင့် လျှပ်စစ်မီးဖိုကွိုင်ပျက်နေသည်ကို ပြုပြင်ရာမှ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်ပွား၍ ဦး ……….ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့ရှိ ဦး…… ၏ တွင်/သံဂဟေစက်ရုံ အလုပ်သမား…….. သည် မိန်းခုံ ပလပ်ပေါက်မှ Two Pin Socket ဖြင့် ရေပန့်မော်တာသို့ ဓာတ်အားရယူ၍ ကားရေဆေးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းပြီးချိန်၌ မိန်းခုံပလပ်ပေါက်မှ Two Pin Socket ကို ရေစိုလက်ဖြင့် ဆွဲဖြုတ်စဉ် ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်ပေါ်၍ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ လယ်တီရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော ဦး……… ၏သမီး မ………. သည် ရေစိုသည့် လက်ဖြင့် မီးကြိုးနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော အင်တာနာတိုင်ကို (Booster Antenna) ကိုင်မိရာမှဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ်၊ သိမ်ဆိပ်မြို့တွင် ဦး…… မှမိမိနေအိမ် ခြံဝန်းအတွင်း ရေမော်တာဖြင့် ရေတွင်းမှ ရေတင်မှုဆောင်ရွက်နေရာ ရေတင်၍မရသဖြင့် လျှပ်စစ်မီး ခလုပ်မပိတ်ဘဲ ရေမော်တာကို ကိုင်တွယ်ပြုပြင်ရာမှ ရေမော်တာ ကိုယ်ထည်မှ တဆင့်လျှပ်စစ်စီးဝင်၍ ဦး………. ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် အမျိုးအစားများအနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သေဆုံးသူ ၂၈ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သေဆုံးသူ ၃၄ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအထိ သေဆုံးသူ ၂၁ ဦးရှိခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်စဉ်များကို သုံးသပ် ကြည့်ပါက ခန္ဓာကိုယ်ရေစိုအနေအထားဖြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း မီးခလုပ်မပိတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ မြေပြင်တမံတလင်းများတွင် ခြောက်သွေ့သော ဖိနပ်မစီးဘဲ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းကြောင့် ဓာတ်လိုက်သေဆုံးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
1. အိမ်သုံးပစ္စည်းများအား ရေစိုလက်၊ ရေစိုနေသော ခန္ဓာကိုယ်၊ ရေစိုနေသော အဝတ်အစား ဝတ်လျက်ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုရပါ။
2. တမံတလင်း၊ မြေပြင်ပေါ်၌ ခြောက်သွေ့သော ဖိနပ်စီးထားခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်တွယ်အသုံး မပြုရပါ။
3. လျှပ်စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကလေးငယ်များ လက်လှမ်းမမီသော နေရာတွင် တပ်ဆင်ရ ပါမည်။
4. ပျက်စီးနေသော မီးပလပ်၊ ဆော့ကပ်များ မသုံးရပါ။
5. မိန်းခလုပ် မပိတ်ဘဲ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကိုယ်တွယ်ပြုပြင်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
6. ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်ပွားပါက ဓာတ်မလိုက်နိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုခုဖြင့် တွန်းထုတ်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း ပြုလုပ်ရပါမည်။ (ဥပမာ - ခြောက်သွေ့သော ဝါးလုံး၊ သစ်သားချောင်း)